Hawo wadata baraf iyo duufaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hawo duufaan iyo baraf ay la socdaan.Foto: Johan Nilsson/Scanpix.
Hawo wadata baraf iyo duufaan
Publicerat onsdag 27 januari 2010 kl 13.05
Hawo wadata duufaan qaboow iyo baraf ayaa soo wajahday dalkan Iswiidhen, hawadaasina oo ka soo jeedda jahada waqooyi galbeed.
Waxaa haddaba laga cabsi qabaa caqabado la soo gudboonaata waddooyinka gawaaridu ku safraan iyo sidoo kale iney duufaantaasi wadooyinka gooyso. Gaar ahaan waxaa la saadaaliyay in dhulka xeebaha ku yaal ey ku di'i doonaan baraf aad u fara badan gaarana saddex decimeter iyo dabeeylo xoogan. Carriga Lappland ayaa sidoo kale looga digayaa dufaan.
Heeyadda saadaalinta hawada ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano SMHI ayaa khatarta duufaanta iyo barafka ku qiyaastay digniin gaarsiisan darajada labaad dhammaan waqooyiga dalkan, halka magaalada Istockholmina khatarta duufaantaa lagu qiyaasay digniin gaarsiisan darajada koowaad, lana filayo inuu da’o baraf baaxaddiisu gaarsiisan tahay hal illaa laba decimeter.
Shirkadaha korontada ee Vattenfall iyo Eon ayaa heegan galiyey shaqaalahooda, si ay wax uga qabtaan haddii ay la soo gudboonaato caqabad koronto la'aan ah bulshada ku nool nawaaxiga waqooyiga dalkan Iswiidhen, qaasatan Västerbotten iyo Västernorrland